Viagra helping CIA win afghan friends - General - Somali Forum - Somalia Online
By Sir-Qalbi-Adeyg, December 28, 2008 in General
Qalbi adeyg bro it is sad how they insult our judgment with their druga, i feel bad for our muslim UMMAH ever where.
Gaal wax walba material u arkaa. Afar afar kaniini markee ka qaataan odeyaashaas, oo been misinformation ah ama sheer fabrication ah ku daldalaan as they used to do with Reer Soofiyeet and Reer Ingiriis before them, iyagaa finally ogaan doono that their kaniini qasaaro u siiyeen.
Odeyaashaas soon, however, too, iyagaa ka daali doono waxaan, hadda wey ku cusubtahee. Odey 70 ama 60 jir wali usoo taagan in uu wax shukulo. Acuudi bilaahi, hunguri meel kale ka weynaa. War neefso, wadnaha yuu ku istaagin ma dhihi kariyee.